बैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ,होशियार,यसरी ठगिनुहोला नि ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रवास > बैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ,होशियार,यसरी ठगिनुहोला नि !
बैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ,होशियार,यसरी ठगिनुहोला नि !
(यो फोटो नक्कली भिसाको हो)
काठमाडौ। विदेशमा आर्कषक रोजगारी पाउने प्रलोभनमा दलाललार्इ लाखौं लाख पैसा बुझाउँदै हुनुहुन्छ ? त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने रोकिनुस् तपार्इ ठगीमा पर्दै हुनुहुन्छ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१८ का सात जना युवालाई बहराईन पठाईदिने भन्दै २४ लाख रुपैयाँ ठगेर धादिङ्ग लापाका श्याम बहादुर तामाङ्ग फरार भएका छन् ।
बहराइनको नक्कली भिषा देखाएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १८ सराङकोटका राजकुमार नेपाली, रोशन परियार, रवीन्द्र बि.क., बलराम नेपाली, रमेश परियार र महेन्द्र नेपालीसँग ३ लाख ५० हजार र प्रकाश थापासँग ३ लाख रुपैयाँ उठाएर तामाङ्ग फरार भएको पीडितले बताएका छन ।
हामी यसरी ठगियौ ?
यो २०७३ चैत्र महिनाको कुरा हो । पोखरा आलु माईला चोकमा मेरो दाइ सुमन परियारको टेलर छ । श्याम तामाङ्ग लुगा सिलाउन त्यहाँ आउँथे । हामीहरु बेरोजगार भएको भन्दै दाइलाई राम्रो ठाउँ आए विदेश जाने कुरा ग(यौँ । दाइले श्यामलाई भेटन भन्नुभयो । हामीले भेट्यौँ । उसले सुमन दाइको भाइहरुलाई राम्रै देश पठाईदिने भन्दै हामीलाई आश्वास्त पारे ।
हामीसंगैँ हाम्रा अरु साथीहरुले पनि विदेश जाने कुरा गरे हामी सात जना भयौँ । श्यामले हामीलाई बहराईनमा राम्रो हुन्छ त्यहीँ पठाईदिन्छु नआत्तिन भने । श्याम हाम्रो सराङकोट घर मै गएर २ दिन बसेको पनि छ । यती घनिष्ट भए पछि हामीलाई उ प्रती भरोसा झनै बढ्दै गयो । हामी सबैको पासपोर्ट पनि लियो । चैत्र दोस्रो साता बहराइनको भिषा आएको भन्दै ३ लाख ५० हजार जुटाउन भन्यो । वैशाख १६ गते हामीलाई भिषा देखाएर एक एक लाख रुपैयाँका दरले सातै जनासंग लियो ।
हामी बाँकी २ लाख ५० हजार जुटाउनतर्फ लाग्यौँ । उस्ले बारम्बार फोन गरेर छिटो पैसा तयार गर्न भन्थ्यो । चैत्र २४ गते हामी सबैले पैसा तयार ग¥यौँ । उस्ले हिमालयन बैकंको आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न भन्यो । हामी मध्ये प्रकाश थापाले २ लाख र बाँकी ६ जनाले २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले पोखराको न्युरोडमा रहेको हिमालयन बैकंको शाखामा खाता नं ०४४०५३४३६४००११ मा पैसा जम्मा गर्यौँ ।
वैशाख ५ गते भित्र उडी सक्ने हुनाले अब भिषा लागेको पासपोर्ट र टिकट आउने कुरा श्यामले गरेका थिए । वैशाख १ गतेदेखी श्यामको फोन स्वीच अफ भयो । वैशाख ५ गते नै उडाउँछु भनेको मान्छे सम्पर्कमा नै आएन ।
वैशाख ३ गते श्यामको साथी बताउने एक जनाले फोन गरेर पासपोर्ट गाडीमा आउने भन्दै बसपार्कमा गएर लिन भने । हामी त टिकट, भिषा पासपोर्ट आयो होला भन्दै खुसी भएर बसपार्क गयौँ । नारायणगढको बसमा हाम्रो पासपोर्ट मात्रै आएको रहेछ । हामी झसंग भयौँ । टिकट र भिषा खोई भनेर सोध्न सम्पर्क गर्दा सबै सम्पर्क नम्बर अफ छ । हामी त लुटिएका रहेछौँ ।
हामीसंग श्यामलाई पैसा दिएको प्रमाण भनेकै बैकं भौचर मात्रै थियो । यसैका आधारमा कारबाही अगाडी बढाउन नमिल्ने भन्दै बैदेशिक रोजगार विभाग जान कास्की प्रहरीले भन्यो । हामी काठमाडौँ आएर विभागमा उजुरी गर्न गयौँ । बैंकको रसिदकै भरमा उजुरी दिन नमिल्ने भन्दै विभागले उजुरी लिन अटेर ग(यो ।
इमोमा भएको च्याट देखाएर हामी ठगिएका हौँ भनि बिन्ति गरेपछि बल्ल विभागले उजुरी दर्ता ग¥यो र उसलाई पक्राउ गरि पठाउन धादिङ्ग र कास्की प्रहरीलाई चिठ्ठी लेख्यो । दुबै ठाउँका प्रहरीले श्याम तामाङ्ग फेला पार्न नसकिएको जानकारी दिएको छ । हामीले न्याय पाउन सकेनौँ । ऋण गरेर ल्याएको पैसा डुब्यो । हामी बिच्चल्लीमा पर्यौँ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ २४
२०७४ जेष्ठ २४ गते १४:५७ मा प्रकाशित
संसदमा भवनमा गोली चल्यो ! एके–४७ जस्ता अत्याधुनिक हतियार चलाउने को ?
फाइदा हुने भएपछि गाउँगाउँमा सेयर भर्नेको भिड
सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले काम गर्दैन, सुशासन र विकास मुख्य एजेन्डा : प्रधानमन्त्री ओली
बजेट जेठ १५ मै !
माइक्रोफार्ईनान्सको २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर